Umhla wobuhlanga u-Beyonce noJay Zi ngokubhekiselele kumahemuhemu okuthenga izindlu ezibiza
Nangona i-paparazzi ayikwazi ukuziqhayisa ngeefoto zokuqala zeewele ezizalwayo eziseBeyonce noJay Zee, zithatha kuphela imifanekiso yabazali abasandul 'ukuzalwa abanakekela abantwana babo kwaye balungiselela ukufudukela kwindlu entsha yokunethezeka, musa ukulibala ngokuthandana.
Ukushiya amakhaya abantwana
NgoLwesithathu ntambama, uBeyoncé oneminyaka engama-35 ubudala ubonwe kwinkampani yakhe, uRob Z, oneminyaka engu-47 ubudala, eWest Hollywood. Emva kokunikezela amawele angamazibulo uSir and Rumi kumannies kunye nendodakazi yabo endala uBlue Ivy, lo mbhangqwana waya kwindawo yokudlela yaseSushi Park kwi-Sunset Strip apho badla khona uSushi. Ukushiya indawo, abazithandayo banquma ukulala esitrato ukuze bazuze iinkwenkwezi kunye nenyanga, kwaye abavakalisi babathatha.
UBeyonce noJay Z bahamba kunye nomhla
Umculi ngeenwele zakhe, ngokukhawuleza aphinde asebenze ngokuvisisana naye, egqoke iingubo ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe kunye ne-neckline evulekile, imikhono emilenze kunye nekhanda elivela kwi-Alexis's Pre-Fall 2017 iqoqo, ibonakala ilungile kwaye ihlala ihlekisayo.
Njengoko abasebenzi beziko baxelele iincwadana, inkwenkwezi, ezafika kunye nabalindi, zihlala kwindawo yokutyela malunga neyure, zixoxa nezinye iindwendwe ngendlela enobubele.
Intengo ye rekhodi kunye neendwendwe ezithandekayo
Okwangoku, kwaziwa ukuba isivumelwano sokuthengwa kweBeyoncé kunye noJay Mansion kwisithili sase-elite iBel-Air, esasibeke amehlo ngoJuni, sele sisayinwe. Abaqabane baye basindiswa kakhulu ngokunika i-$ 130 yezigidi esikhundleni se-$ 130 yezigidi kwizindlu ezintsha, kodwa babe ngabaphathi bezindlu ezibiza kakhulu eLos Angeles.
Umfanekiso wesakhiwo seBeyonce noJay Zee
Ngoku uBeyonce noJay Z bahlala kwindlu yasehlobo eqeshwe eMalibu
I-Supermodel Dautzen Cruz ayizange inqikaze ukugxininisa ukuthengiswa kwelineni
Ummeli uKeira Knightley unomama omncinci kwaye unamandla!
UJamie Fox wabonisa umzekelo wenkalipho waza walondoloza umfokazi
UJamie Dornan no-Amelia Warner
UJeremy Renner no-Amy Adams
ULiam Payne wagxotha umyalezo womtshato noCheryl Cole
UAdam Levin noBekhati Prinslu bajonga ikhaya elitsha
UHugh Grant kunye noMartin McCachon "bavule" kwi-set of "Uthando Lwenene"
UMzalwan 'uCharles Swift wenza ibhola lakhe kwi-movie
U-Daddy u-Puff wayenomdla ngokutshintshwa kwegama
Karolina Kurkova - umama kabini!
U-Rose Leslie walula i-ring yaseChina eHarrington
U-Angelina Jolie wabetha wonke umntu ngendlela enhle kwindawo yokudlela yaseGyu-Kaku
Inkwenkwezi yesiFrentshi ye-movie "iTeksi" ifuna ukufumana ipasipoti yaseRussia
I-pancake yakho e-kefir
I-Leopard manicure - iimbono eziphambili zeendlela zokulungiselela izipikili ezimfutshane kunye ezide
Ipeyinti yecala - indlela yokukhetha ukhetho olungcono, ukujonga ngokuthe ngqo kwintlobo eyaziwayo
Imithetho engama-20 eyoyikisayo yexesha elidlulileyo
Izinwele ezingumngxuma emva kokususwa kweenwele
Shebbie chic ngaphakathi
Ungakhetha njani ihobhi yekhitshi yanamhlanje?
Yintoni enokuyilungiselela isidlo sakusasa?
Ungayifaka njani loo mveliso?
Umaski wokukhula kweenwele kunye neDimexidum
Ngaba kunokwenzeka ukukhohlisa i-polygraph?
Indlela yokukhupha amanzi emzimbeni ekulahlekeni kwesisindo?
Isikhati esikhuphekileyo - yintoni enxibayo ende, i midi kunye neyesiketi esifutshane?
Uncedo lokuqala lokuxhatshazwa
I-White Swimsuit 2013
Indlela yokusebenzisa i geyner?
Ikhekhe kwi-microwave - zokupheka ngokukhawuleza kwiimpahla ezikhethiweyo zasekhaya
I-Colposcopy yomlomo wesibeleko - njani eyenziwa?